Jack Grealish oo si cad u sheegay waxa uu dareemay kaddib imaatinkiisa kooxda Manchester City – Gool FM
Jack Grealish oo si cad u sheegay waxa uu dareemay kaddib imaatinkiisa kooxda Manchester City
Dajiye September 2, 2021
(Manchester) 02 Sept 2021. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Manchester City ee Jack Grealish ayaa qirtay inuu cadaadis dareemay kaddib imaatinkiisa Cityzens.
25 jirkaan ayaa ku biiray Manchester City xagaagan, isagoo kaga yimid kooxda Aston Villa, lacag dhan £100m, wuxuuna qalinka ku duugay heshiis muddo 4 sano ah.
Shabakada “Goal” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay xiddiga khadka dhexe kooxda Manchester City ee Jack Grealish, wuxuuna yiri:
“Waxaan ciyaaray kulammo Manchester City ah, waxaan imid aniga oo aaminsan inaan si aad ah u beddeli karo kulammada, taasina waa sababta ay iiga bixiyeen lacagtan xad -dhaafka ah.”
“Tani waa waxa uu sameeyo sida Kevin De Bruyne, wuxuu badelaa kulammada, waxaan ciyaaray kulankii FA Community Shield ee Leicester City, iyo ciyaartii ugu horreysay xilli ciyaareedka ee Tottenham, halkaas oo aan dareemay inaan samayn karay.”
“Laakiin tan iyo markaas, xirfadeyda waxay si fiican uga bilaabatay Man City, xilligan la joogo, gaar ahaan kubbadda cagta, waxaad fiirisaa ciyaartoyda booskeyga ah, ma gaari doontid meesha ugu sarraysa ilaa sannadaha dambe.”
“Tusaale ahaan, waxaad eegtaa De Bruyne, oo 30 jir ah, wuxuu hadda saxiixay heshiis cusub, waxaana laga yaabaa inuu hadda ku jiro heerkii ugu sarreeyay xirfadiisa.”
“Waxaan jiraa 25 sano, waxaan haystaa saddex, afar ama shan sano si aan u gaaro da’diisa, waxaan haystaa wax badan oo aan barto, wax badan oo aan horumariyo, waxaan dareemayaa inaan samayn doonaa sanadaha soo socda. , hubaal.”
Si kastaba ha ahaatee, Kubadsameeyaha cusub ee Manchester City ayaa ilaa hadda dhaliyay 1 gool, 3 kulan oo uu la ciyaaray kooxda Cityzens.
RASMI: Nuno Espirito Santo oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha Agoosto ugu fiicnaa horyaalka Premier League
RASMI: Man United oo xaqiijisay lambarka uu xiran doono Cristiano Ronaldo... (Miyaa lambarka 7-aad looga siibay Cavani?)